न्यूरोडमा शूरु भयो स्मार्ट पार्किङ :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
आजदेखि काठमाडौंको न्यूरोडमा स्मार्ट सवारी पार्किङ शुरु भएको छ। काठमाडौं महानागरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट उक्त पार्किङ शुरु गरेकहो।
न्यूरोडको धर्मपथ र बिशालबजार अगाडिको ठाउँमा स्मार्ट पार्किङ् व्यवस्था शुरु गरिएको हो।
महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले पिओयस मेसिनबाट क्युआर कोडसहितको बिल प्रिन्ट गरेर सेवा शुरु गरेका हुन्। महानगरले ब्हिल्स ट्रुलीयोर्स प्रा. लि सँगको सहकार्यका यो सेवा शुरु गरेको हो ।
स्थानीय र सरोकारवालासँग लामो समय छलफल गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै भूमिगत र बहुतले पार्किङ् स्थल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढिरहेको मेयर शाक्यले बताए।
शुरुवात्मा नयाँ सडकका २ वटा खण्डमा शुरु गरिएको सेवालाई क्रमशः प्युखा, खिचापोखरी, धर्मपथ, पाको र दरबारमार्ग क्षेत्रमा बिस्तार गरिने बताउँदै प्रा. लि. का सूचना प्रविधि संयोजक हरिश अग्रवालले सेवाबाट सहरी पार्किङ् अस्तव्यस्ततामा सुधार ल्याउन प्रयास गरिने बताए।
योजनामा रहेका सबै ठाउँ सञ्चालनमा आएपछि एकपटकमा करीव ८०० वटा मोटरसाइकल र ४० वटा गाडी पार्किङ् गर्न सकिन्छ । ती ठाउँमा स्मार्ट अटोमेटेड पार्किङ् सिस्टमबाट सञ्चालन हुनेछन् । नयाँ सडक जानु अघि उपभोक्ताले मोवाइलबाटै रियल टाइममा कुन ठाउँ खाली छ भनेर हेर्न र पार्किङ् गर्ने ठाउँ बुकिङ् गर्न सक्छन् । ठाउँ रिजर्भ नगरी पुग्नेले अगाडि राखिएको स्क्रिन हेरेर पार्किङ् गर्ने ठाउँ हेर्न सक्छन् । त्यस ठाउँको व्यवस्थापनका लागि गोप्रो क्यामरा सहितका पार्किङ् सहयोगीले सवारी चालकलाई सहयोग गर्नेछन् । उनीहरुसँग भएको क्यामराले त्यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई आवाजसहित रेकर्ड गरेर राख्न सक्छन् ।
पार्किङ् गर्दा दुई पाङ्गे सवारीकालागि प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ, चार पाङ्ग्रेका लागि प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसरी संकलन गरिएको रकम सम्बन्धि रेकर्ड सिधै्र महानगरको प्रणालीमा जानेछ । यसबाट राजस्व छलि गर्ने सम्भावना नहुने अधिकारीको भनाइ छ ।
यो प्रणालीबाट पार्किङ् स्थान बुकिङ् गर्न पार्क केटिएम मोवाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । यो एप्लिकेसन एन्ड्रोइड र इओएस दुवै सिस्टमका मोवाइलमा उपलब्ध हुनेछ । यो एप्लिकेसनमा पार्किङ् गर्ने ठाउँको उपलब्धताका बिषयमा जानकारी दिनेछ । त्यसै सूचनाका आधारमा पार्किङ् गरिने सवारीको प्रकार (२ पाङ्ग्रे हो वा ४ पाङ्ग्रे हो) वटम थिचेर जानकारी दिनुपर्छ । यसपछि आफूले पार्किङ् गर्न चाहेको ठाउँ छनौट गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ । त्यहाँ दिइएका ठाउँमध्ये आफूले चाहेको ठाउँमा बुकिङ् गर्न सकिन्छ ।
पार्किङका सम्बन्धमा कुनै समस्या आएमा शुल्क नलाग्ने यो नम्बरमा ९८०१५७१५४० फोन गर्न सकिने छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार १, २०७६, २१:३२:००
जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सेञ्ज फाइनान्स फेयर’ मेला सुरु
निशानले बिजुली कार ‘लिफ’ ल्याउने पक्का
सुरु भयो टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर (भिडिओ)
केटिएम मोटरसाइकलको नयाँ सर्भिस सेन्टर खुल्यो
२०० सिसीको एडभेञ्चर मोटरसाइकल–एक्सपल्स २०० को बिक्री सुरू